Kismaayo News » Qodobada Shirka London Maxaa nooga Baxay?W/Q: Abdihakin A. Asir
Qodobada Shirka London Maxaa nooga Baxay?W/Q: Abdihakin A. Asir
In kasta oo shirka waxtarkiisa iyo wax tar yaradiisa lagu ogaan doono waxa ka soo baxo hadana dadka indha indheeya qaababka shirarka noocaani ahi ay u hirgalaan oo ay weliba miro dhal u noqdaan, waxay wada sheegeen inaysan jirin wax wadahadal ah oo ku qabsoomi kara muddada kooban ee maalintaas la kulmayo balse wax kasta hore ayaa loo soo dhameeyay oo meeshaasi sixiixyo iyo wixii la mid ah ayaa ka dhici doona.
Waxaa la wada sheegay in ay ka soo qeyb geli doonaan dowlado badan oo gaaraya ilaa iyo afartan dowladood oo ay ku jiraan dowlado waaweyn iyo weliba kuwo xiriir fiican la leh Soomaaliya oo ay ku jiro dalka Turkiga, waxaase suaal ah qodobada ilaa iyo hadda shirka looga hadli doono ma yihiin kuwo la is dhihi karo wixii ka soo baxo waxbey u tarayaan ummadda Soomaaliyeed?
Waxaan qabaa iney lagama maarmaan tahay in si fiican oo ay weliba ku jirto qadarin la qadarinayo ummadda Soomaaliyeed iyo aayahooda loo fiiriyo toddobada qodob ee la sheegay in shirkaas looga hadli doono oo weliba halkaan aaad ka akhrin karto: http://www.fco.gov.uk/en/news/somalia-conference/ . Waa in si xikmad ku jirto loo fiiriyo loogana munaaqashoodo si waxa laga sugaayo ay u noqdaan wax ummada masiirkooda u qalma amaba looga tashto sidii loo soo bandhigi lahaa waxyaabo ka mudan oo loo baahan yahay in Soomaalida iyo weliba wadamada saaxiibada la ahi iney xoogga saaraan.
Qodobka ugu horeeya waxa uu ku saabsan yahay suggidda amaanka, waxa ayna sheegayaan in lacag loogu aruurinayo Amison iyo sida aan ka fahmay ciidamada iyo heyadaha garsoorka Soomalida. Waxaase ladadooda soo horeeya oo muhiimadda badan lihi waa in lacag loo aruuriyo Amison. Maxaa diidaaya in lacagta la aruurinayo loo aruuriyo ciidamada qaranka laguna dhiso cudud isugu jira ciidamada xoogga dalka iyo kuwo boolis ah oo wadanka loogu sameeyo, ooba la yareeyo ciidamada dibbadda ka imaanaya maadaama uu wadanku u baahan yahay inuu isagu isku filnaado oo uu weliba ammaankiisa berriga iyo baddaba uu sugo?
Qodobka labaad waxa uu ku saabsan yahay isbedelka siyaasadda iyo weliba waxa bedeli doona dowladda marka uu waqtigoodu dhamaado. Waxaase la socda wax ay ku magacaabeen guddi wadajir ah oo maamuli doona dhaqaalaha. Hadaba waa sahlan tahay in la iska warsado waxa bedeli doona dowladda hadda dalka joogta oo markii horayba la soo sameeyay oo aanan aheyn dowlad ay soomaalidu dooratay, oo ayadu ka fiican dowlad la’aan , balse waa maxay sababta loo sameynayo guddigaan isku jirka ah ee la rabo in la dhiso? Ma waxaa guddigaas loo sameynayaa in dhowladda dhalan doonta aysan awood u laheyn in ay wax ka qabato arrimaha dhaqaalaha? Mase waxaa jira awoodo dheeri ah oo la rabo in Soomaalida laga qaado oo weliba si khaas ah loo hoos geeyo guddiyo aan Soomaali aheyn? Mase runtii waxa loo dan lee yahay in dhaqaalaha Soomaalida la cuuryaamiyo oo laga xayuubiyo xurriyadda dhaqaale abuurka oo ay caanka ku noqdeen, sida xiritaan la xirayo Bangiyada Soomaalida oo badanaa loo yaqaan Xawaaladaha?
Qodobka sedexaadi waa in la caawiyo gobolladda Soomaalida, taasoo weliba si isku xiran oo caalami ah loo cawinayo. Hadaba waa sidee caawinaadaasi? Ma waxa ay noqon doontaa caawinaad ay heyado kala duwan balse iswada ogi ay dalka magaalo kastaaba ay goonidooda wax ula qabtaan? Mase waa cawinaad aan lagala tashan doonin dhowlladda dalka maamusha oo heyad kastaaba ay si laga warqabo ay iyadu si toos ah ay ula fal gasho maamul gobol oo dalka ka jira? Miyaysanna taasi keeni doonin murar iyo is fahanwaa soo kala dhex gala dhowladda dhexe iyo maamulladda gobolladda ka jira?
Qodobka shanaadi waxa uu ku saabsan yahay in la soo xiro ama la jebiyo ganacsiya jid gooyidda ay Soomaalidu ku sameeyayn maraakiibta xeebaha Soomaaliya mareysa, waxaase marnaba meesha lagu sheegin waxa laga yeelaayo maraakiibta qashinka badahaas ku daadinaysa iyo kuwa kheyraadka ka gurayano. Waxa culayska la saarayo waa tuugada meelahaas ka qaraabata iyada oo aan la fiirinaynin wixii ku qasbay inay jid gooyadda sameeyaan.
Walow ay jiraan qodobo kale oo aan jecleystay inaan waxba ka dhihin maadaama aan rabo inaan qoraalka koobo hadana dhamaantood waa kuwo ka hadalkoodu uu qof walbaaba meel ka arki karo, una baahan qoraal dheer oo aan qoraal yar waxba looga dhihi karin , hadana marka aad fiiriso sida ay yihiin qodobada shirka looga hadlaayo iyo weliba waxa ay Soomaalida qaarkood ka rajeynayaan shirkaan aad iyo aad ayey u kala duwan yihiin.
Su’aalaha aan anigu isweydiiyay oo iiga soo dhex baxay qodobada aan halkaan ku soo bandhigay runtii waa kuwo u baahan jawaan, jawaabteeduna waxa ay imaan doontaa marka uu shirkaani soo dhamaato waxaase muhiim ah in aanan la noqonin dhaan raac oo si feejigan loo fiiriyo waxa na loo sheegaayo oo aan weliba kala baxno waxa aan u maleynayno inay dalka iyo dadkaba anfac u lee yihiin.waana inaan waxa kalena aan si nasteexo iyo wanaag ku jirto aan ugu sheegno cida wada, inaysan xal iyo wanaag ugu jirin ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa muhiim ah inaadan ka qeyb qaadan wax aad og tahay ineysan ummadda Soomaaliyeed dan ugu jirin haddii aadan awood u la heyn inaad halkaas ku soo bandhigto waxa dadka dan u ah, oo aadan weliba noqon mid iska sixiixa wax kasta oo la hor keeno. Haddii aad ka mid noqoto dadka talada la weydiinaayo waa inaad marka hore aad heshaa faahfaahin ku saabsan waxa laguu sheegaayo si aad talo dadka iyo dalka u cuntanta aad halkaas uga dhiibato, haddii kalana aad ku adkeysato in ummadda rabitaankeeda la xushmeeyo.
Waxaan wada og soonahay in Soomaaliya gobollo badan oo ka mid ah ay ka jiraan dagaallo ay horkacayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ah oo aan weliba shirkan waxba looga soo qaadaynin sida ku cad qodobada shirka. Waxaa maalin kasta ku dhinta dad shacab ah madaafiicda lagu garaacayo magaalooyinkaas. Dhamaan dadka meelahaas ku dhimanaayo waa Soomaali kamada fiicna kuwa waxbaa loo qabanayaa la lee yahay. Waa muhiim in labadaas ficil ee iska soo horjeeda uu mid meesha ka baxo oo loo soo jeesto sidii geeska Afrika looga dhigi lahaa dhul xasilan iyada oo ahmiyadda la siinaayo waxa ay dadku rabaan.
Guntii iyo gabagabadii, waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in ay iyaga baadidu ka maqan tahay oo ay u baahan yihiin iney baadidaas si wada jir ah u doontaan oo ay iska iloobaan mucaaradnimada aanan macnaha badan ku dhisneyn oo ay mar kasta is mucaaradayaan, oo aysanna cid kale ka sugin iney mashaakilaadkooda u xaliyaan. Ogow waxa aadan ku helin walaalow ineysan waxba kuu teri doonin ee walaalkaada wanaaji si uu kuu wanaajiyo oo isku day inaan qof kasta oo Soomaali ah siiso waxa uu xaqqa u lee yahay si aad adigu u hesho waxa aad xaqqa u lee dahay. Shir kasta oo laguu qabtaa, cid kasta oo isku daydo iney adiga wax isugu kaa duwdo, haddii aadan adigu diyaar u aheyn wax ka hirgelaayo ma jiraan ee yaanan dalka iyo dadkaba waqti looga qaadin waxaan waxba ka soo baxeynin.
Norway “Kenya kuma taageereyno qaadashada dhul Soomaaliyeed” Way dhibanyihiine u dhimriya! Olole nadaafadeed oo ay qeyb ka yihiin ciidamada oo ka biloowmey Kismaayo Labbo qof xoolo dhaqato ah oo lagu diley suuqa xoolaha Kismaayo Xaawo Wiilo iyo seeygeeda Faarax Feyte ayaa dil ka geystey Kismaayo All material copyright Kismaayo News © Kismaayonews.com. All Rights Reserved